कानुन बनेको ४० वर्षसम्म किन कार्यान्वयनमा आएन ? » RealPati.com
कानुन बनेको ४० वर्षसम्म किन कार्यान्वयनमा आएन ?
काठमाडौ । कुनै पनि कानुन संसदबाट पारित भएपछि कहिले कार्यान्वयन हुन्छ? कानुनको प्रचलित व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयनको सुनिश्चित गरिएको हुन्छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार केही कानुन तत्काल कार्यान्वयनमा आउँछन् तर नेपालका केही कानुन पारित भएको चार दशक पुग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। कतिपय कानुन सरकारले सूचना प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गरेको हुन्छ तर केही यस्ता कानुन पनि मौजुदा छन्, ती कार्यान्वयनका लागि सरकारले सूचना प्रकाशन गरेको छैन्।
अर्थात कानुन छ तर प्रचलन नआएको खबर छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हालै राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिलाई यस्ता मौजुदा ऐनहरुको सूची पठाएको छ। मौजुदा सूचीअनुसार केही ऐन हालसम्म पनि राजपत्रमा सूचना नभएका कारण कार्यान्वयनमा नआएको पाइएको छ।
समितिले ऐन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरिरहेको छ। न्यायिक कोष ऐन अध्ययन गरिरहेको छ। न्यायिक कोष ऐन २०४३, नेपाली भाषा पकाशन संस्थान ऐन २०२१, लिखितहरुको गोप्यता सम्बन्धी ऐन,२०३९ सूचना प्रकाशन नभएका कारण प्रचलनमा नआएका हुन्। मन्त्रालयले मौजुदा ३३९ ऐनहरुको सूची समितिमा पठाएको हो। गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ।
हैटीमा भूकम्पमा परि तीन सयको मृत्यु
ओलीको सपथविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश राणा आफैले गर्ने
आज ज्येष्ठ नागरिक दिवस, ६० वर्ष माथिकालाई दियो टेलिकमले सिम निःशुल्क